Ku saabsan Us-Phu Ly Bao Co. Ltd.
15 + Khibrad Sano ah Soosaarida Shandadaha
Shandadaha wax soo saarka ilaa 2004, oo loo dhoofiyey 30+ dal oo ay ku jiraan US, Europe, Southeast Asia, Middle East iwm Lahaanshaha koox xirfadlayaal R & D ah oo ku sugan Vietnam, kooxda QC iyo xakamaynta tayada adag. ISO9001, SGS, CE shahaado.
Iyada oo ku saleysan nooca qalabka, waxaan soo saarnaa ABS / PP / PC / Aluminium daawaha / shandadaha dharka ee Oxford.
Faa'iidooyinkayaga shandadaha waa kuwo aan biyuhu lahayn, heerkul sarreeya u adkaysta, bey'ada u roon, adkeysi leh, khafiif ah iwm. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay safarka, isticmaalka maalinlaha ah, dhiirrigelinta, safarka ganacsiga iwm.
Shaqaalaha, aagga iyo kartida
Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle ah oo ku jira shandadaha, PLB Vietnam waxay leedahay aqoon isweydaarsi casri ah 8000 Sqm, 100 + shaqaale maxalli ah oo xirfad leh. wax soo saar bille ah oo balaaran waxaan siinaa qiimaha warshada iyo alaab tayo sare leh macaamiisha, dhamaantood waxay waafaqsan yihiin heerka caalamiga ah.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee wax soo saarka iyo maaraynta iyo sahaminta, PLB waxay dejisay nidaamkeeda maaraynta tayada u gaarka ah. Soo maray ISO9001: Shahaadada nidaamka tayada 2000 iyo ISO14000 nidaamka shahaadada maamulka deegaanka. PLB waxay hirgelisaa fikradda ah abuurista qiimaha macaamiisha si ay ula kulanto baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha kala duwan, waxayna si joogto ah u siisaa macaamiisha xalalka dhibaatooyinka farsamo.
Warshadu waxay leedahay mashiinno jeex jeexa / mashiinka finanka / mashiinada feedhka / mashiinada tolida / mashiinada wax lagu jaro.
Macaamiisha ugu weyn
Waxaan u adeegnaa in ka badan 30 macaamiisha caalamiga ah ee adduunka. Iyada oo wax soo saarkeena iyo awooddeena adeegga waxaan ilaaliney iskaashiga muddada fog ee macaamiishayada badankood.
Kooxdayada Koontaroolidda Tayada ayaa baaraysa alaabada kahor rarka, oo ay kujiraan Hubinta huurka gudaha alaabada, cilladaha, misprints, baakadaha, iwm Shahaadada: ISO, SGS, CE, RTS, ECT.
Adeegga ugu horreeya ； Raadinta heer sare;
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) 71 - 73 Street No. 1B, Binh Tri Dong B, Degmada Binh Tan, Ho Chi Minh City, Vietnam Nam
0329861789 Chen （Mr） - 0909350418 Maajo (Ms)